သင့်ရဲ့စာသင်ခန်းအတွင်းကွန်ဂိုကျောင်းသားများသှနျသငျဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello
လူငယ်တွေကရည်ရွယ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ဦးဆောင်သည့်အစီအစဉ်ကိုအောက်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြဇာတ်ရုံထဲမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ, အစိတ်အပိုင်းအတွက်, သားသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်မှာ. ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR / B.Sokol နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ
ပြင်သစ်, ဆွာဟီလီ, Kikongo, Tshiluba, Kinyarwanda အဘိဓါန်, တချို့အင်္ဂလိပ်.
မူလတန်းကျောင်းဖြစ်ပါသည် (သီအိုရီ) အတင်းအကျပ်ပြုသော, နှင့်အများပြည်သူပညာရေးကိုအစိုးရကကစီမံခန့်ခွဲကျောင်းများနှင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သောတစ်စပ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ကလေးများမူလတန်းပညာရေးအသက်အရွယ်ကိုစတင် 6-7, နှင့်ပုံမှန်အားတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့မှနံနက်ယံ၌လေ့လာ. ယေဘုယျအားဖြင့်, တဦးတည်းဆရာအပေါငျးတို့သဘာသာရပ်ကိစ္စရပ်များသွန်သင်မည်, နှင့်စာသင်ခန်းရောထွေးအသက်အရွယ်မရွေးကျောင်းသားများကိုပါဝင်သည်. သူတို့ရဲ့ပညာရေးကိုရှေ့ဆက်ဖို့, ကျောင်းသားများကိုတန်း၏အဆုံးမှာအမျိုးသားရေးစာမေးပွဲတွင်ယူရမယ် 6. အလယ်တန်းကျောင်းအဆင့်ပါဝင်ပါသည် 7-12. အဆိုပါပညာသင်နှစ်ဖြစ်ပါသည် 30 ရက်သတ္တပတ်အရှည်နှစ်ယောက်ပညာသင်ကာလသို့လည်းကျိုး.
၏အဖြစ် 2003, DRC ကကျောင်းကထဲကသားသမီးများ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရာခိုင်နှုန်း၏တဦးတည်းရှိခဲ့. မိန်းကလေးများဟာ DRC အတွက်အနိမ့်မှုနှုန်းမှာကျောင်းများသို့တက်ရောက်ရန်, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမမူလတန်းသို့မဟုတ်အထက်တန်းကျောင်းပညာရေးနှင့်အနိမ့်စာတတ်မြောက်ရေးနှင့်အတူဒုက္ခသည်အများစုအဆင့်ဆင့်အမျိုးသမီးများမှာ. ပညာရေးကိုလက်လှမ်းမီရှိလာရုံတချို့ကအတားအဆီးမလုံလောက်သောရန်ပုံငွေပါဝင်သည်, ကျောင်းလခ, အသိုင်းအဝိုင်းအကြမ်းဖက်မှုများ, ကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှု, မကြာသေးမီကပဋိပက္ခကာလအတွင်းကျောင်းကအဆောက်အဦးများနှင့်အဗဒ္ဒုန်.
ယူဂန်ဒါနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းမှာကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့ကွန်ဂိုကလေးများအင်္ဂလိပ်စာပိုမိုထိတွေ့မှုရှိခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်. ဘူရွန်ဒီနှင့်တန်ဇန်းနီးယားမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်ငယ်ရွယ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးလိင်ခေါင်းပုံဖြတ်ဘုံဖြစ်ပါသည်. မိန်းကလေးများအခြေခံကုန်စည်လဲလှယ်အတွက်လိင်အလုပ်သို့အတင်းအဓမ္မနေကြတယ်, နှင့်အဆင့်သို့မဟုတ်ငွေလဲလှယ်အတွက်မိန်းကလေးများအနေဖြင့်လိင်တောင်းဆိုဆရာ, ဆရာမများ၏မကြာခဏအစီရင်ခံလည်းမရှိ. တန်ဇန်းနီးယားမှာရှိတဲ့ Nyaragusu စခန်းထဲမှာ, လူ့လျော်ကြေးငွေ, မိသားစုများအကြွေးတွေများအတွက်ငွေပေးချေတဲ့ပုံစံအဖြစ်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များပေးသောအတွက်, ဘုံဖြစ်ပါသည်.
59% ကွန်ဂိုဒုက္ခသည်အဘယ်သူမျှမပါးစပ်အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်နှင့်တစ်ခု ပို. ရာခိုင်နှုန်းကိုဖတ်ရှုဖို့မနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် (65%) သို့မဟုတ်ရေးရန် (66%) အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်. ပိုများသော US မှာလက်ရှိကွန်ဂိုဒုက္ခသည်လူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ထက်အမျိုးသမီးဖြစ်ပါသည်, နှင့် 20% ကြင်ဖော်မဲ့မိခင်များဖြစ်ကြသည်. နီးပါး 40% အရှေ့ DRC အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြ. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် DRC အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုလူမှုရေးသက်ရောက်မှုနားလည်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး.
ကွန်ဂိုသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်၌ကြီးသောမာနထောင်လွှားယူ. မည်သို့ပင်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ, စင်ကြယ်သောဝတ်ဆင်ရန်ဘုံက, လက်ဖြစ်အဝတ်. အလုပ်လုပ်မယ့်အခါ, ပြည်သူ့တက်ဝတ်စားဆင်ယင်. ကွန်ဂိုလည်းအလွန်ဖော်ရွေများမှာ. လူတွေကိုတွေ့ဆုံသောအခါအဖြစ်ကောင်းစွာထွက်ခွာသောအခါ, ကိုယ်လက်လှုပ်ဖို့ဓလေ့ထုံးတမ်းဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်လေးစားမှုလိုအပ်တဲ့အဆင့်ကိုညွှန်ပြရန်တဦးတည်း၏ကျန်းမာရေးနှင့်မိသားစုအကြောင်းကိုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်. တစ်နေ့တာ၏အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးလူတွေနှုတ်ဆက်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, ဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝ, ဒါထွက်. သက်ကြီးရွယ်အိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအရာကတဆင့်ရိုသေလေးစားမှုကိုပြသထားပါသည်, သူတို့နှင့်အတူသဘောတူညီချက်ရိုးသားထက်ပိုမိုအရေးကြီးသောစဉ်းစားသည်.
ကွန်ဂိုမကြာခဏကိုယ်ထိလက်ရောက်သူတို့သားသမီးဆုံးမ, သောအမေရိကန်အတွက်ဥပဒေရေးရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပြဿနာကိုတင်ဆက်. အစဉ်အလာ, ကလေးထိန်းအမေရိကန်များ '' မိဘအုပ်ထိန်းအလေ့အကျင့်တွေနဲ့မကိုက်ညီကြောင်းသောအသိုင်းအဝိုင်းတာဝန်ဖြစ်ပါသည်. မိဘများကွာအခါကွန်ဂိုကလေးများမကြာခဏအငယ်သူတို့အတှကျဂရုမစိုက်. ဒါဟာအမေရိကန်အတွက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဥပဒေရေးရာပြဿနာကိုလည်းတင်ဆက်.
ကွန်ဂိုတွေထဲမှာ, နျူကလီးယားမိသားစုအဘိုးအဘွားပါဝငျသောအများကြီးပိုကြီးတဲ့တိုးချဲ့မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါသည်, လေးများ, အဒေါ်, ဝမ်းကွဲ, တူ, တူမ, အသွေးအားဖြင့် related မဟုတ်ပင်သူတို့အား. အဆိုပါ DRC အတွက်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများထဲကအတော်များများ matrilineal များမှာ. မိခင်ရဲ့ဘက်မှာအသက်အကြီးဆုံးဦးလေးအရေးကြီးဆုံးအထီးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖခင်မထက်ကလေးတစ်ဦးရဲ့ဘဝအပေါ်ပိုပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်နေသည်. မိခင်ရဲ့ဘက်မှာဝမ်းကွဲမောင်နှမစဉ်းစားနေကြတယ်. ကွန်ဂိုမကြာခဏဝေးသောမိသားစုဝင်မခေါ်စေခြင်းငှါ (အသွေးအားဖြင့် related မဟုတ်သို့မဟုတ်ပင်တစ်စုံတစ်ဦးက) သူတို့၏သား, သမီး, အစ်ကို, သို့မဟုတ်အစ်မ. ဤသည်ပင်လယ်ရပ်ခြားအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဥပဒေရေးရာဆက်ဆံရေးထူထောင်ဘို့နှစ်ခုလုံးရှုပ်ထွေးမှုများဖန်တီးထားပါတယ်.
ကျားမအခန်းကဏ္ဍအစုစုကွဲပြား. အမျိုးသားများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အိမ်ထောင်စု၏အဓိကဝင်ငွေ်ငွေရရှိသူတွေနဲ့ကာကွယ်အဖြစ်မှတ်နေကြတယ်, နှင့်အမျိုးသမီးအများအား၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်လူကိုဖန်ဆင်းဆုံးဖြတ်ချက်များကိုနာခံဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်. ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှစ်ဦးစလုံးလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာအိမ်မှာထွက်ကူညီပေးနေစတင်. ယေဘုယျအားဖြင့်, အမြိုးသမီးမြားပြည်တွင်းအိမ်မှုဝေယျာတာဝန်ခံများမှာ. အချို့သောကျေးလက်ဒေသများတွင်, သူတို့တစ်တွေငယ်ရွယ်စဉ်မှာလက်ထပ်သည်အထိမိန်းကလေးငယ်များအိမ်မှာနေဖို့ရမယ်. သို့သော်, မြို့ပြအမျိုးသမီးတွေပိုပြီးလွတ်လပ်တဲ့ဖြစ်နှင့်မိသားစုကိစ္စရပ်များတွင်ပိုမိုဟုပြောဆိုကြလေ့ရှိပါတယ်.
သငျသညျမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးများရှိပါကကွန်ဂိုကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အပေါ်ဝေမျှဖို့, အီးမေးလ်ပို့ပါ: info@usahello.org.
သင်ဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး print ထုတ်နိုင်ပါတယ် ကွန်ဂိုသင်ယူသူပရိုဖိုင်းကို PDF အဖြစ်နှင့်သင့်စာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.